နယူးဇီလန်သည် Galaxy Note7ကိုဈေးကြီးသောစက္ကူအလေးချိန်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည် Androidsis
နယူးဇီလန်သည် Galaxy Note7ကိုဈေးကြီးသောစက္ကူအလေးချိန်အဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည်
Samsung က Galaxy Note7ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ကြေငြာပြီးတဲ့အခါယူနစ်သုံးသန်းကျော်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခံရပြီဖြစ်ပေမဲ့ပိုင်ရှင်တွေကတော့ထပ်ခါတလဲလဲတောင်းဆိုခဲ့ကြသော်လည်း၎င်းကိုပြန်ပို့ရန်တွန့်ဆုတ်နေကြသည်။ အချိန်ကုန်ခြင်းမှာ၎င်းသည်စျေးကြီးသောစုဆောင်းသူ၏ပစ္စည်းဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။
၎င်းပိုင်ရှင်များကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဖုန်းများပြန်ပို့ရန်အတင်းအကျပ်ကြိုးစားမှုကြောင့် Samsung သည် Galaxy Note7၏ဘက်ထရီကို ၆၀% အထိကန့်သတ်ထားသောအထူးဆော့ဖ်ဝဲလ် update ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သော်လည်းနယူးဇီလန်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်လည်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည် သူတို့ကွန်ယက်များတွင်ဖုန်းကိုပိတ်ထားသည်.
နယူးဇီလန်ဆက်သွယ်ရေး (TCF) ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Geoff Thorn ကအတည်ပြုလိုက်သည် နယူးဇီလန်ရှိကုမ္ပဏီများအားလုံးသည် Samsung Galaxy Note7ကိုနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းမည်ဖြစ်သည် နိုဝင်ဘာလ 18 ရက်နေ့အထိ။ ဒီလိုဖြစ်လာတာနဲ့အမျှ Galaxy Note7ဟာအလွန်စျေးကြီးတဲ့စက္ကူအလေးချိန်ပဲ။ သင်သည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုလက်ခံခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကွန်ယက်မှတဆင့်အင်တာနက်ကို ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ.
၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအားလုံးကပိုင်ရှင်များနှင့် ဆက်သွယ်၍ ဖုန်းကိုပြန်လည်အစားထိုးသို့မဟုတ်ပြန်အမ်းရန်တောင်းခံရန်ကြိုးစားမှုများစွာရှိသည်။ "
သို့တိုင်၊ Galaxy Note7သည်အော့ဖ်လိုင်းသို့မဟုတ် WiFi မှတဆင့်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
အချို့ကဤသည်မှာအကြီးအကျယ်တိုင်းတာသည်ဟုယူဆကြပြီးဖောက်သည်များက ၄ င်းတို့ကိုခွင့်ပြုချက်ပေးသင့်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အန္တရာယ်ရှိသော terminal တစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်ကိုမမေ့ပါနှင့် အမှန်မှာ Samsung သည်နောက်ဆုံးအားဖြင့် Galaxy Note7၏ယူနစ်အားလုံးကိုပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးပမ်းနိုင်သည် ဝေးလံခေါင်သီ deactivationယခုအချိန်တွင်အတည်မပြုရသေးသောအရာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » နယူးဇီလန်သည် Galaxy Note7ကိုဈေးကြီးသောစက္ကူအလေးချိန်အဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည်
Asphalt Xtreme ရှိသဲများ၊ ချောင်းများနှင့်ရွှံ့များကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းစေသည်
Samsung က Galaxy Note7ကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုကိုမည်သို့ကန့်သတ်ရမည်ကိုလေ့လာသည်